Xildhibaanadii Mooshinka Kagudbiyay Madaxweyne Xasan Oo wada hadal ogolaaday – STAR FM SOMALIA
Qaar ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ee madaxweynaha ka gudbiyay mooshinka ayaa go’aan ay qaateen waxay ku sheegeen iney ogol yihiin wada hadal lagu dhameeyo mooshinka madaxweynaha ay ka gudbiyeen.
Ka dib kulan maalintii shalay ahayd magaalada Muqdisho ay ku yeesheen in ka badan 50-Xildhibaan gaar ahaan kuwa mooshinka ka gudbiyay madaxweynaya ayaa waxay cadeeyeen in wada hadal u badalayaan mooshinkaasi.
Waxayna xuseen intaa badalkeeda diyaar u yihiin wada hadal.
War saxaafadeed ay mudanayaashaasi ka soo saareen kulankooda oo nuqul ka mid ah soo gaaray warbaahinta ayna ku xusnaayeen 12 qodob ayaa lagu sheegay in ay qaateen baaqii guddoomiyaha baarlamanka ee ku wajahnaa in wadahadal lagu dhameeyo kala qeybsanaanta mudanayaasha ee la xiriirta mowshinka laga keenay madaxweynaha.
Xildhibaan C/laahi Maxamed Adan Shaacir oo ka mid ah mudanayaasha ayaa sheegay iney go’aankan qaateen markii ay tixgeliyeen baahida loo qabo dhameystirka dhismaha maamul goboleedyada, codsiga gudoomiyaha baarlamanka iyo kan beesha caalamka.
Mooshinka laga gudbiyay madaxweynaha ayaa xaalad adag oo dhanka siyaasada ah geliyay dalka,waxaana walaac ka muujiyay beesha caalamka.